Ezingosini zengevu ukujola amasayithi, isibonelo, abantu baxhumane ngenhloso ethize - bazane kangcono nabobulili obuhlukile enombono kudlule isikhathi ngesikhathi ikhompyutha noma umhlangano wangempela.
izikhumbuzo njalo nge e-mail mayelana nemicimbi (imiyalezo emisha, ukuvakasha okusha, mayelana namazwana amasha lesi sithombe) abasebenzisi amandla aqhubeka eza emuva esayithini ukuphola. Futhi okubaluleke kakhulu, lokho kungatholakala ngokuhlola ukhetho ukuhlola kunoma iyiphi idolobha emhlabeni: kusukela Uman elakhiwa dating, sisuka eNew York siya yaseMagadana.
Ngo bedla ingevu kuyi-abapholayo izingosi, ungasebenzisa Web-ikhamera yevidiyo ucingo. Kukhona iqoqo Izithonjana ezahlukene ukuthi ahlotshiswe kahle futhi kube lula ukuxhumana. Ukuze zokuxhumana ukuze ziphumelele nakakhulu, ungakwazi ugcwalise lemibuzo Imininingwane ngaphambi bezigabisa. Khona-ke, ngaphambi kokuba ubhale inhliziyo izicelo ongafunda lemibuzo futhi unqume ukuthi ukuxhumana kwakho ezithakazelisayo futhi ethela, kuyoba lula ukucacisa izihloko ingxoxo.
Ngeshwa, abantu abathile bekholelwa ukuthi okuxhumana ku-intanethi ku ingqondo Ukuzifihla kwakhe isihlobo ongalinikeza imikhawulo ukufaneleka. Leli cala ihlinzeka block obusebenzayo akuyona oxhumana ezidingekayo amabhoklolo wayengasakwazi nginibhalele. Futhi interlocutors ezithakazelisayo kakhulu kungafakwa uhlu izintandokazi ukuze ufinyelele ngokushesha.
Lonke umlando lilondolozwe imiyalezo. Kuyinto ngisho eminyakeni embalwa ukuthola imiyalezo endala uma kunesidingo kungenzeka.
Uma uthenga isimo VIP, unganikeza izipho virtual interlocutors yakhe, ungasebenzisa Usesho oluphezulu ukuze usheshe uthole abalingani ofanele kakhulu. isimo VIP futhi kunikeza ithuba bawanake ukuthenga izindawo izithombe zakhe ebhekisela iphrofayela yakho emkhakheni yokuhlala ekhethekile. Ukubukwa sephrofayela yakho iyokwanda futhi babe maningi amathuba ukuthola umuntu ophelele ngokwakho.
Uma ufuna ukuba simazi nentombazane enhle ukuba nobuhlobo obungathi sina, kubalulekile ukuya daba. Qinisekisa ukuthi usebenzisa i-search izihlungi ethuthukile Zikhipha le engadingekile, salokhu udinga imali ku-akhawunti yakho nge-ruble angu-20 ngeviki ukwenza kusebenze VIP-isimo. Phakathi kwezinkulungwane amantombazane amahle njalo uthole eyakho. Kuyinto kudingekile kuphela ukuthi bakholwe njalo ukubheka njengoba kufanele.
ukuphola zihehela izingxoxo zabo, futhi izizathu lokhu kuchaziwe ngenhla. Landzela imitsetfo yokuxhumana ebonisa inhlonipho wengxoxo sengathi ukhuluma nomuntu ubuso nobuso.
Amathuluzi ukulungisa imoto. Imisa ngokuzenzakalela amathuluzi: abakhiqizi, amanani, ukubuyekezwa
Iyiphi indlela engcono kakhulu ekhishini isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu? Ikhishi echibini mixer Kaiser, Grohe
Yini lokushisa kufanele ibe inja: inkambiso ngeziphambeko kuzo